TTSweet: အော်ဇီ ပီအာ လျှောက်ရအောင် (၂) ...
Posted by T T Sweet at 2:33 PM
Mon Petit Avatar March 22, 2011 at 4:40 PM
Thank you for the details MaMaSweet.
Skilled Assessment အဆင့်ကို သိပ်မရှင်းလို့အစ်မ.. သူတို့လိုတဲ့ စာရွက်တွေ ပို့ပေးလိုက်ရင် ပြီးရောလားရှင့်.. ပုံမှန် ဘယ်လောက် ကြာတတ်ပါသလဲရှင့်..
ဆုမြတ်မိုး March 22, 2011 at 5:35 PM
thz for sharing TSweet
mgchaint March 22, 2011 at 9:45 PM
Skill assessment က သက်ဆိုင်ရာ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို သွားပြီးရင် Migrant package ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်။ ဥပမာ အင်ဂျင်နီယာဆိုရင် ကိုယ် assessment လုပ်ချင်တဲ့ Filed မှာ လုပ်သက်ကာလအတွင်း ကိုယ်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ Project တွေကို အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းခဲ့သလဲဆိုတာ ကို သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Essay ပုံစံအတိုင်း စာလုံးရေ ၂၅၀၀ ခန့် ၃ ပုဒ် ရေးပေးရတာပါ။ နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ကျောင်းမှာ Term paper ရေးသလိုပါပဲ။ ပြီးရင် IELTS နဲ့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများကို ပို့ပြီး လျှောက်လွှာတင်ရတာပါ။ (http://www.engineersaustralia.org.au/about-us/role-activities/msa/msa_home.cfm/) အင်ဂျင်နီယာ (အိုင်တီ မဟုတ်ပါ) ဆိုရင်တော့ အဲဒီကို သွားကြည့်လိုက်ပါ။
Pls kindly answer my queries below:
1)For Item 4, the working expeirence counts for total years of experience(ie, any company), or experience only in one(last) company?
2)How about if I am not able to produce any letters(recommendation) from my current job, except payslips?
3)Can you let me know the agent to contact in Singapore?
mgchaint March 23, 2011 at 1:19 AM
(၁) Skilled Assessment လုပ်တဲ့ ရာထူးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလုပ်အတွေ့အကြုံ စုစုပေါင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ ဥပမာ Mechanical engineer အဖြစ်နဲ့ ကုမ္ပဏီ A မှာ လုပ်သက် ၃နှစ်၊ M&E Project Engineer အနေနဲ့ ကုမ္ပဏီ B မှာ လုပ်သက် ၂ နှစ် ဆိုရင် Mechanical engineer အဖြစ် Assessment လုပ်ပြီး စုစုပေါင်း လုပ်သက် ၅ နှစ်ပြလို့ရပါတယ်။
(၂) Recommendation Letter မဟုတ်တောင်မှ လက်ရှိကုမ္ပဏီကနေ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်ကနေ အလုပ်စ၀င်တယ်၊ ဘာရာထူးနဲ့ ဘယ်Job Function တွေ ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ စာတင်ပြနိုင်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။ အဲဒီ စာလေးတောင်မှ မထုတ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် နောက်ဆုံးလက်နက်အဖြစ် အလုပ်ဝင်တုန်းက Contract လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာချုပ်ကို တင်ပြဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ခဲ့ဖူးသမျှ အလုပ်တွေရဲ့ Contract Agreement ကို တင်ပြနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
(၂) လွန်ခဲ့တဲ့ တပါတ်က ကျွန်တော်အသိ လှမ်းမေးတဲ့ Agent ကတော့ OCSC GLOBAL PTE LTD
Dear Ko Chaint, noted and really appreciate for the info and sharing. Thanks and all the best to you and your family.
Thanks Much Saya Pwa !
Move faster, young fellows of AITians have settled there.
please i need your help? may i know good canada immigrant agent in singapore?
i choose canada bec IELTS band is lower than AUSTRALIA.only main applicant need IELTS.
mgchaint March 23, 2011 at 8:59 PM
အရင်တုန်းကတော့ ကနေဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သေသေချာချာ လေ့လာခဲ့တယ်။ အခုတော့ ဥပဒေတွေပြောင်းနေလို့ ကျွန်တော် သေသေချာချာ မသိဘူး။ ဟုတ်မယ်ထင်ပါတယ်။
အပေါ်က ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ agent ဆီမှာလည်း မေးရင်ရပါတယ်။ အဲဒီ agent တွေက လုပ်ပြီဆိုရင် ၂ ခုလုံး လုပ်ပါတယ်။
ဇူလိုင် March 24, 2011 at 12:17 AM
အင်း....ဦးခြိမ်. ပွဲစားလုပ်လို.ရပြီ....စိတ်ကူးမလွဲနဲ.နော်..အော်စီ ခေတ်စားနေတာ။ part time လုပ်ရင်တောင်မဆိုးဘူး။
mgchaint March 24, 2011 at 12:35 AM
ဟားဟား... လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်က စိတ်ဝင်စားခဲ့သေးတယ်။ အော်စီက ပွဲစားလုပ်မယ်ဆိုရင် သူတို့အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရှိမှ လုပ်လို့ရတာလေ။ အဲဒီလက်မှတ်ရဖို့ကလဲ အော်စီမှာ ရှေ့နေဖြစ်မှ ရမှာဆိုတော့ အဆင်မပြေဘူး။
နေအုန်း လေ့လာလိုက်အုန်းမယ်။ ရှေ့နေတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တွဲဖက်ပြီးတော့ မြန်မာများအတွက် ပွဲစားဆိုပြီးတော့ လုပ်ရင်ကောင်းမလားလို့...။
ဘာပဲ ပြောပြော ကိုယ့်မြန်မာတွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ နှုတ်၏စောင့်မခြင်း လုပ်ခွင့်ရတာကိုပဲ ကျေနပ်ပါတယ်။ အခက်အခဲရှိရင် အချိန်မရွေးဆက်သွယ်ပါ။ တတ်နိုင်သလောက် အကြံပေး အကူအညီပေးပါမယ်။
အခုတောင် အကြံပေးခ တောင်းရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေတယ်...း)
I also thinking of canada, lazy to study IELTS and not too sure to get even 6.5
I also think of Canada, lazy to sit IELTS and not too sure to get even6or 6.5.
Thank you for your post and reply comments.
Mg Kyaw Zaw April 2, 2011 at 1:44 PM
When are you going to write detail about the difference between Singapore & Australia?
We r waiting to read.
T T Sweet April 2, 2011 at 1:46 PM
အော်ဇီကို မရောက်သေးလို့ ခြားနားချက် အသေးစိတ်ကို သေချာမသိသေးပါဘူး မောင်ကျော်ဇောရေ။ ရောက်ပြီးရင်တော့ ရေးဖြစ်မှာပါ။
အင်ကြင်းသန့် October 21, 2011 at 3:50 PM
Thanks again for the sharing! :)
Hi U Chaint and TTsweet,
I am regular slient reader of ur blog. All the information that u gave is so useful to me. I would like to ask you about subclass 176 Skilled Sponsor Visa. For my case, my friend's friend can be Sponsor to my application. Is that possible? Can you tell me difference between State Government Nomenation and Relative Sponsorship? I found out the Form 1277 that shows the Sponsor should be relative and step parents or brother....
As per ur blog, u applied PR under subclass 176. For ur case, did ur agent find sponsor for u or u find urself?
Can u give me suggestion? Should I contact agent or apply myself?
I hope that u will response my question soon!
Best of luck for two of u and ur little princess:))
mgchaint November 19, 2011 at 12:58 AM
ကျွန်တော်သိထားသလောက် ဆွေမျိုးမှ လွဲပြီးတော့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေကနေ စပွန်ဆာလုပ်တာမျိုးမရပါဘူးခင်ဗျာ။ မိမိရဲ့ ဆွေမျိုးရှိခဲ့ရင်တောင်မှ ကိုယ့်အတွက် အမှတ်ပိုရတာပဲ ရှိပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အမှတ်တွေကို မိမိရဲ့ ပညာအရည်အချင်း အလုပ် လုပ်သက်အတွေ့အကြုံ နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုများကနေ ဖြည့်စည်းရမှာပါ။
အေးဂျင့်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်သလား မသင့်လားဆိုတာကတော့ မိမိသဘောအတိုင်းပါပဲ။ ကိုယ်က ကိုယ်လုပ်ရမဲ့ လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကျွမ်းကျင်တယ် ဆိုရင်တော့ အေးဂျင့်မလိုအပ်ပါဘူး။ အေးဂျင့်ဆိုတာ ကိုယ်ကို အကြံပေးရုံ လျှောက်လွှာတင်ပေးရုံကလွဲပြိး ကျန်တာ အကူအညီ မပေးနိုင်ပါဘူး။ လိုအပ်တာက ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ဖြည့်စည်းရမှာပါ။ ဖောင်ဖြည့်တာမှာ အေးဂျင့်က အကူအညီ အကြံပေးနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ ဘွဲ့နဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် လိုအပ်တဲ့ အက်ဆေးတွေ ကို ကိုယ်ဘာသာကိုယ် ရေးရမှာပါ။ အေးဂျင့်က ဘာမှ လုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။
နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ လျှောက်တဲ့ State Government Sponsor ဆိုတာ အဲဒီ State မှာ လိုအပ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို ရေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ကိုက်ညီလို့ စပွန်ဆာပေးပါဆိုပြီး State ကို လျှောက်လွှာတင်ရတာပါ။ စပွန်ဆာဆိုတာလည်း ကျွန်တော်သည် State မှ လိုအပ်သော အလုပ်အကိုင် အရည်အချင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံသောသူဖြစ်ပါသည်ဆိုတာပါပဲ။ လိုအပ်တဲ့ အမှတ်ပေါ်မှာ မည်သို့မျှ အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လိုအပ်တဲ့ အမှတ်ပြည့်မပြည့်က ပညာ အရည်အချင်း လုပ်သက် အလုပ် နဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှုသာလျင် အဓိက ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
U chaint and TTSweet,
I amareader of TTsweet's blog since 2010. Currently i am in Malaysia and now i am interested to apply PR to Australia. I gone through with agent and readalot of info about Australia. I have PhD and work at University for two years. Agent said that i can apply at Northern Territory which is Darwin area and could get job at Darwin Uni. But he mentioned that i need to stay there three years and after that i will get PR. i do not have info for this and if you do not mind, could you tell me how it is. I knew that it could not be easy for you to say since this post was posted 2011. Thank you and may you and your family well and happy always!